जनवरी १ देखि विदेशबाट ल्याउने सामानमा कडाई, के के ल्याउन पाइन्छ, के पाइदैन ? « Postpati – News For All
जनवरी १ देखि विदेशबाट ल्याउने सामानमा कडाई, के के ल्याउन पाइन्छ, के पाइदैन ?
पुस २३, काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बिदेशबाट फर्किनेले ल्याउने सामानमा कडाई गरिएको छ।
जनवरी १ देखि तोकिएभन्दा बढी सामान ल्याएमा सम्पूर्ण रुपमा जफत गर्न थालिएको छ। त्यसअघि कतिपय सामानमा सहुलियत दिइँदै आएको थियो।